'बामदेवजीको बुद्धि बल्ल पलाएछ'- चित्रबहादुर केसी -
प्रकाशित मिति : २०७८, २५ कार्तिक बिहीबार
काठमाडौं । राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले पाँच दलीय उच्चस्तरीय राजनीतिक समन्वय समितिको काम, कर्तव्य र अधिकारलाई व्यवहारको कसीमा हेरिनुपर्ने बताएका छन् ।
आज नेपाली रेडियो नेटवर्कको कार्यक्रम नेपाली बहसमा कुरा गर्दै नेता केसीले भने, “प्रजातन्त्रमा आफूलाई लागेको कुरा भन्न पाइन्छ । यसको कामकारबाही स्पष्ट हुनुपर्छ भन्नु ठीकै हो । तर सरकारभन्दा माथि कुनै संयन्त्र हुँदैन । यो समिति सरकारलाई सहयोग र समर्थन गर्न बनेको हो । सरकारलाई कमजोर बनाउन पनि कहीँ राजनीतिक समन्वय समिति बन्छ ?”
समन्वय समिति बनेपछि कांग्रेसभित्रै र एमालेबाट पनि विरोध भइरहेको छ नि भन्ने पत्रकार धमलाको प्रश्नमा उनले भने, “कांग्रेसभित्र पनि अन्तरविरोध छ । एमाले हिजो के थियो, आज के भयो ? त्यसैले बर्बराइरहन्छ । संसद् चल्न नदिएर ओलीले सरकारलाई मदत गरिरहनुभएको छ ।” समन्वय समितिका कामकारबाही र सीमाका बारेमा कात्तिक ३० गतेको बैठकमा
छलफल हुने उनले बताए । नेता केसीले एमसीसी पास गर्ने दुस्साहस जनतालाई मान्य नहुने दाबी गरे । उनले भने, “ओलीजीले पनि एमसीसी पास गर्न खोज्नुभएकै हो । उहाँ असफल हुनुभयो । कांग्रेसले पनि पास गर्न खोजेको छ । तर उसको बहुमत कहाँ छ ? एमसीसीबारे जनमोर्चाको धारणा क्लियर कट् छ । हामीले उहिल्यै देशव्यापी विरोध गरेका हौं ।
अरु पार्टी त कोही संशोधन भनेका छन्, कोही यथावत् गर्ने भनिरहेका छन् ।” उनले थपे, “शक्तिराष्ट्रको आदेश पालक बन्न खोज्दा संघीयताले कसरी ढाड भाँचिदिएको छ ? नेपाल अब अफगानिस्तान र सिरिया बन्न तयार छैन । अमेरिकी जालमा मुलुकलाई फसाउनु हुँदैन । बामदेवजीको बुद्धि बल्ल पलाएछ ।”चोलेन्द्रशमशेर राणालाई प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति गर्ने दलहरुले
अहिले खुदो खाएको भन्दै उनले व्यंग्य गरे । उनले भने, “उनको नियुक्तिबारे संसदीय समितिमा सबैभन्दा बढी विरोध गर्ने हामी हौं । ठूला दलहरुले आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्न प्रधानन्यायाधीश बनाएका थिए, बल्ल अहिले खुदो खाएका छन् । उनलाई महाभियोग लगाउने बारेमा गठबन्धन दलहरुबीच एकमत छैन । एउटै पार्टीमा त एकमत छैन, कार्यगत एकता भएको मोर्चामा के एकमत हुन्छ ?”